Lọ ngere - China Fence Manufacturers, Suppliers
M ekara kpaliri welded ntupu ngere N'ihi Solar Plants
3D Curved welded waya nsu na-akpọ waya waya welded nsu, kpaliri ígwè ngere, nche nsu, anyanwụ ngere. Ọ bụ ụdị ire ere anyị na-ere ọkụ na mpaghara APAC ọkachasị Japan ma bụrụ ndị a na-ejikarị arụ ọrụ mbara igwe dị ka ihe nchebe.
Ugbo ala bụ ụdị ogige ịkpa akwa dịka ngere njikọ njikọ ma ọ bụ maka maka mgbanye nke anụ ụlọ dịka ehi, atụrụ, mgbada, ịnyịnya. Yabụ, ndị mmadụ kpọkwara ya "ngere ehi" "ngere atụrụ" "ngere ngere" "ngere ịnyịnya" ma ọ bụ "ngere ụlọ anụ ụlọ".
3D Curved welded waya nsu, na-ewu ewu weld ntupu ngere dị ka nchekwa fencing nke obibi na North American
3D Curved welded waya nsu na-ezo aka 3D welded waya nsu, 3D ngere obubọk, nche nsu. O yiri nke ahụ na ngwaahịa ọzọ M-udi welded waya ngere ma dị iche na ntupu spacing na elu ọgwụgwọ ruru dị iche iche ngwa. A na-ejikarị ogige a eme ihe na ụlọ obibi iji gbochie ndị mmadụ ịbanye n'ụlọ gị na-akpọghị.
C-ekara ntụ ntụ ntekwasa welded ntupu ngere N'ihi Power Plants
C-yiri welded waya ntupu ngere bụ ihe ọzọ na-ere ọkụ na Japan maka obibi iji ma ọ bụ osisi anyanwụ. A na-akpọkwa ya waya welded nsu, galvanized ígwè nsu, nche nsu, anyanwụ ngere. Ma maara 3D Curved welded waya nsu na ihe owuwu ma dị iche iche na-ehicha udi na elu na ala nke ngere.
A na-akpọkwa eriri njikọ eriri dị ka ntaneti waya, ntan-waya ntan, eriri waya, eriri ngere, ikuku hurricane, ma ọ bụ ngere diamond. Ọ bụ ụdị nke ogige a kpara akpa nke a na-esite na waya waya awara awara na ogige ịgba gburugburu na-ewu ewu na Canada na USA.